Torolalana arohevitra ho an’ny tanora | UNICEF Madagasikara
Torolalana arohevitra ho an’ny tanora
Manampy ny tanora handray anjara hamaha olana atrehan'izy ireo eo amin’ny fiarahamonina
Ny tanjon'ity torolalana momba ny arohevitra ho an'ny tanora dia ny fanampiana ny tanora hamaha ireo olana atrehan'izy ireo eo amin’ny fiarahamonina. Niaraha-natsangana tamina tanora Afrikanina maro izy io mba hanamafisana ny fahaizan’izy ireo, hahafahany mitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainany sy eo amin’ny fiarahamonina. Ity torolàlana ity dia maneho ny fomba fijery manokan’ireo mpanoratra fa tsy voatery maneho ny hevitry ny Tahirim-bolan'ny Firenena Mikambana ho an’ny ankizy akory.
Ireto misy zava-marina vitsivitsy efa fantatrao: miatrika fanamby lehibe ny kaontinantantsika sy izao tontolo izao. Na dia tsy tompon'andraikitra amin'ireny olana ireny aza isika dia anjarantsika ny mamaha azy ireny. Maro amintsika no miaina ireo fanamby ireo isan'andro. Ny fahantrana dia tsy zavatra an-tsoratra fotsiny, tsy azo antoka ny fanabeazana ary ny fiovan'ny toetrandro dia efa miantraika amin’ny fiainantsika amin’izao fotoana izao.
Ity misy zavatra mety tsy fantatrao: haingana dia haingana ny fitombon’ny isan’ny tanora aty Afrika. Raha tombanana ho 580 tapitrisa ny isan’ny mponina dia 47 % amin’ny mponin’ny kaontinanta dia tanora avokoa, izany hoe avo efatra heny mihoatra ny any Eoropa. Amin'ny taona 2055, vinavinaina hahatratra iray tapitrisa ny isan'ireo tanora aty Afrika.
Ireo fiovana goavana eo anivon’ny mponina Afrikanina ireo dia sady fanamby no soa fanararaotra. Ny azo antoka kosa anefa dia ilaina maika ny fampiasam-bola ho an’ny tanora
Raha apetraka ankehitriny ny politika mifantoka amin'ny ankizy sy ny tanora, hisy fihenana ny fahantrana sy ny tsy fitoviana, hisy ihany koa ny fitomboana ara-toekarena lovainjafy. Raha tsy izany, hiharatsy ny tsy fananana asa, vao mainka hihena ny loharanon-karena isan-karazany, ary mety ho zary mahazatra ny fikorontana.
Na izany aza, azontsika atao, izahay sy ianao, ny mamorona ho avy tsara kokoa. Ity torolàlana momba'ny arohevitra ho an’ny tanora ity dia manampy antsika handalina ireo fizotran’ny arohevitra mitondra amin’ny fiovana. Raiso ho namana jhanampy antsika hamela mamy eto amin’ity tany ity, ity torolàlana ity. Maniry ny hitarika anao hanavatsava ny fizotry ny arohevitra izy. Mifanindran-dàlana ao ny fomba fiasa mazava sy ny tantara mampientam-po an’ireo tanora miady ho an’ny fiovana eo amin’ny fiarahamonina.
Rehefa mamaky ireo tantara ifandimbiasan’ny olana sy ny fahombiazana, izay miompana amin’ny fisorohana ny fanambadian’ny ankizy, ny firotsahana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny maro hafa ireo isika, dia tsaroantsika fa tsy irery isika. Eny, ao anaty fianakaviana mitombo isa hatrany isika, fianakaviana tanora mitondra fiovana miandalana sy mandeha ho azy eo amin’izao tontolo izao.
Ny ivotoerana momba ny raharaham-bahiny (Youth@SAIIA) ao Afrika Atsimo no miara-miasa amin’ny UNICEF amin’ity namolavola ity torolalana ity.
Sokafy ilay singa hahafahanao maka ny torolalana sy ny kahier fanazarana
Safidy Torolalana (PDF) Kahie fanazarana
Fandraisana anjaran'ny ankizy sy ny tanora
Eto Madagasikara,mandray andraikitra ireo tanora mpandrahara
Mpandraharaha tanora 3 no mamorona vokatra ilaina hiadiana amin'ny coronavirus
Marie Lydia Rafaranirina, sady anatin’ny fanahiana no mahazo
Reny 25 taona no niteraka kambana telo tamin'ny voalohan-janany
Komandà Tantely Nirina Andriamboavonjy, eny amin'ny lohalaha
Vehivavy, dokotera, miaramila, Dokotera komandà Tantely Nirina Andriamboavonjy mizara sombimpiainana amintsika, tsy manadino mamporisika ny vehivavy.
Vaozara miady isan'andro ho an'ny zanany vavy tsy salama
Vonona ny hiatrika ny rehetra i Vaozara mba hahasalama ny zanany tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika